Ampidino Galactic Colonies APK ho an'ny Android
Ampidino Galactic Colonies
Ampidino Galactic Colonies,
Galactic Colony dia lalao iray hijerena ny habakabaka sy ny fananganana zanatany. Tadiavo izao rehetra izao namboarina miaraka aminny planeta anarivony. Manomboka kely ny zanatany rehetra.
Atombohy aminny fanomezana fialofana sy sakafo ho anireo mpanjanatanao alohanny hampiasana ny harena voajanahary aminny planeta. Manangana orinasa ary mamorona vokatra teknolojia avo lenta hampitomboana ny zanatany. Mikaroha planeta tropikaly, efitra ary ranomandry ary ampio ny zanatany hivelona aminny tontolo masiaka sy vahiny.
Ny fanjakanao dia hanohy hamokatra loharano na dia tsy milalao aza ianao. Ny anjaranao aminny maha mpanjaka anao dia ny mitantana ny zava-drehetra, mampivelatra ny paikady ary manome baiko. Afaka manafaingana ny famokarana ianao aminny alàlanny fanoratana haingana be, fa tsy mila izany. Ny zava-drehetra ao aminny zanatany dia mandroso aminny hafaingany.
Ampidino maimaim-poana ireo zanatany Galactic ary manomboka mikaroka vahindanitra vaovao.